Xulka Madagascar oo guul ka gaaray Burundi kulan ka tirsan Koobka Qarammada Afrika 2019 – Gool FM
Xulka Madagascar oo guul ka gaaray Burundi kulan ka tirsan Koobka Qarammada Afrika 2019
Haaruun June 27, 2019
(Qahira) 27 Juunyo 2019. Xulka Madagascar ayaa guul muhiim u ahayd ka gaartay dhiggooda Burundi kulan ka tirsan Koobka Qarammada Afrika 2019, kaasoo ka soconaya dalka Masar.
Kulankan ayaa ahaa mid adag waxaana labada xul ay ku kala nasteen qeybta hore kulankan oo qeyb ka ahaa Guruubka B ee Koobka qarammada qaaradda Afrika.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta xulka Madagascar ayaa la yimid goolka qura oo ay kulankan guusha ku qaateen waxaana u dhaliyey 76’daqiiqo Marco Ilaimaharitra, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 1-0 looga adkaaday Burundi.
Xulka Madagascar ayaa sidaas ku galay kaalinta labaad ee Guruubka B iyagoo leh 4-dhibcood, halka Burundi oo la kulantay guuldarradii labaad oo xiriir ah ay halka ugu hooseysa ka hoggaaminayaan guruubkan iyagoo aan wax dhibic ah lahayn.
Dani Alves oo naftiisa u bandhigay kooxda Manchester City & jawaab deg-deg ah uu ka helay
Goorma ayay kooxda PSG ku dhawaaqaysaa saxiixyada Ander Herrera iyo Pablo Sarabia?